Monster Hunter (2020) – Gold Channel Movies
Monster Hunter ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်-သိပ္ပံ-အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းပါ။ ထူးခြားတာကတော့ Resident Evil ကားတွေရဲ့ပင်တိုင်မင်းသမီးချော Milla Jovovich နဲ့အတူ ထိုင်းအက်ရှင်မင်းသား Tony Jaa တို့ ခေါင်းဆောင်ပါ၀င်ထားပါတယ်။
အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ ကပ္ပတိန်တစ်ဦးဖြစ်သူ နာတာလီအာတီမစ်ဟာ သဲကန္တာရမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားတွေကိုရှာဖွေရင်း၊ အဖွဲ့ကွဲပြီး ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုဆီ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကမ္ဘာဦးကရှေးဟောင်းသတ္တဝါကြီးတစ်ကောင်နဲ့ တိုက်ခိုက်ရင်း ဟန်းတား (မုဆိုး) နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ အန္တရာယ်ကြီးလှတဲ့ သတ္တဝါကြီးကိုအတူရင်ဆိုင်လာကြရင်း နောက်ဆုံးမှာတော့ ဟန်းတားတို့ရဲ့လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်ဆီ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာ အာတီမစ်တစ်ယောက် သူမဟာ တခြားကမ္ဘာတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းကို သိရှိသွားပြီး ဟန်းတားတွေနဲ့အတူ ကမ္ဘာနှစ်ခုကြားခရီးသွားနိုင်မယ့်လမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေပါတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်မှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရမလဲ၊ ဘယ်လိုသတ္တဝါကြီးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကို စိတ်၀င်စားစရာကြည့်ရှုရမှာပါ။
Visual Effects ပိုင်းနဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကွက်တွေအတွက် review ကောင်းတွေလည်း ရရှိထားတာကြောင့် စိတ်ကူးယဉ်အက်ရှင်ဇာတ်လမ်း ကြိုက်သူတွေအကြိုက်တွေကြမှာ သေချာပါတယ်။
Translated by May Hsu Wathan Htet & Cherry
Size – 1GB / 390MB
Download Mega SD Myanmar 390MB
Maung ThantMarch 13, 2021Reply
Pyae Phyo AungMarch 11, 2021Reply
link was dead. Please upload again. Thanks.